Fanivaivana manampahefana ambony :: Zandary telo lahy namalivaly ny Praiminisitra teny an-dalambe • AoRaha
Fahasahiana mihoa-pampana. Zandary telolahy no enjehina noho ny fanivaivana ny Praiminisitra Ntsay Christian tamin’iny lalam-pirenena fahaefatra (Rn 4), tamin’ny alin’ny 6 jona lasa teo. Tao anatin’ny tsy fanajana tante­raka no namalian’izy ireo ny fanontaniana napetraky ny Lehiben’ny governemanta nanoloana ny sakana nataon’ ireto zandary ireto tamin’iny lalam-pirenena fahaefatra iny. Misy ihany koa ny ahiahina kolikoly mitambesatra amin’ireto mpitandro filaminana ireto.
Toy izao ny zava-niseho, araka ny tatitry ny loharanom-baovao iray akaiky ny famotorana: tsy nisy fanajana fa novalivalian’ireo zandary miisa telo nanao sakana tany Ambalanjanakomby-Maevatanàna ny Praiminisitra Ntsay Christian, tamin’io alin’ny 6 jona io. Nanontany tsotra ny antony anaovan’izy ireo sakana amin’ny alina ny lehiben’ny governemanta saingy feo avo avy hatrany no nasetrin’ireo mpitandro filaminana. Nosamborina teo no ho eo izy telolahy ary hatolotra ny Fitsarana any Mahajanga.
“Tokony ho tamin’ny 8 ora alina no nisehoan’ity tranga tsy fahita ity. Nisy fiara taksiborosy nosakanan’ireo zandary tao Ambalanjana­komby. Rehefa nijanona ny fiara dia nitaky ny taratasin’ny fiara ireo zandary. Vantany vao voarainy ny fitoerana taratasy dia nihodina tany ambadik’ilay taksiborosy ny zandary namoha ny fitoe­ran’ireo taratasin’ny fiara. Tamin’io fotoana io no tonga ny fiara nitondra ny Praimi­nisitra, ka nijanona tao aorian’ilay taksiborosy. Nivoaka ny Praiministra nanontany ny antony anaovan’ireo zandary an’izao sakana izao amin’ny alina. Teo no niitatra ny raharaha satria voalaza fa sady avo vava ireo zandary no nilaza fa manana taratasy mampanao iraka azy ireo amin’ny asany. Efa azo sary avokoa ny fihetsik’ireo zandary tamin’io fotoana io”, hoy ny loharanom-baovao iray avy any Mahajanga.
Nilatsaka ny baiko taorian’izay rehefa nahare ny zava-nisy ny lehiben’ny Zandarimaria. Nosamborina izy telolahy ka nalefa any Mahajanga natao famoto­rana. Raha tsy misy ny fiovana dia anio no hatolotra ny Fitsarana izy ireo. Ankoatra ny fanaovana tsinontsinona lehiben’andrimpanjakana dia ahiana ho voampanga nanao kolikoly ihany koa ny zandary nitondra ny tarata­sin’ilay fiara tany aoriana.
Vaky fasana :: Navantana eny Tsiafahy ireo fito lahy mpangalatra taolan-dava